SABABTA AY QAJAARKA U LEEYIHIIN CALEEMO CAD: 6 SABABOOD OO WAAWEYN IYO TIRTIRIDKOODA - BEER CAGAARAN
Maxay caleemaha u noqdaan caddaan qajaarka iyo waxa la sameeyo
Cucumber waa khudrado aad u faa'iido leh oo si wanaagsan u saameeya jidhka bini'aadamka. Dalaggu khudradda cagaaran wuxuu ku dhacay jacayl badan oo ka mid ah beeralayda qudaarta ee dalal badan oo adduunka ah. Laakin qajaaradu waxay ku xiran tahay saameynta xun ee cudurro badan iyo cudurrada kala duwan, sidaas darteedna waxay u baahan yihiin daryeel haboon, iyo sidoo kale aqoonsiga waqtigeeda iyo ka saarista sababaha saameynta waxyeellada u leh deegaanka dibadda. Calaamadaha ugu caansan ee khalkhalka geedka qajaar waa muuqaalka kore ee cadcad gaar ah caleemaha. Tani waxay calaamad u tahay xadgudubka caafimaadka ee baadiyaha waxayna u baahan tahay tallaabooyin gaar ah iyo ficil adag oo ku xiran nooca cudurka.
Macmacaanka macaanku waa cudur fungal ah oo khudradda oo kiciya muuqaalka kalluunka ee mycelium. Sababtoo ah horumarka cudurka, mycelium wuxuu daboolayaa dhammaanba dusha sare ee caleen iyo qaababka nooc ka mid ah ubaxyada caddaanka ah. Nidaamkani ma aha oo kaliya isbeddelka qaabka caleemaha, laakiin sidoo kale waxay keenaysaa qalajinta, taas oo ka dhigaysa mid aan suurtogal u ah geeddi-socodka photosynthesis, sidaa daraadeed dhirta si tartiib ah u daciifiyaa. Cudurka noocan oo kale ah wuxuu horseedi karaa luminta qayb muhiim ah oo dalagga ah, iyo sidoo kale si xun u saameynaya sii kordhinta qajaarka ee qaybta loo qoondeeyay beerta.
Waa muhiim! Xaaladaha ugu wanaagsan ee cudurkan waxay ku jiraan xilliga xagaaga oo leh heer sare oo qoyaan, heerkul ah + 17 ... +21 ° C, iyo sidoo kale isticmaalka xad dhaafka ah ee Bacriminta nitrogen.
Si looga hortago cudurkan, waxaa jira dhowr tallaabo oo gaar ah:
wareega dalagga xilliga caadiga ah, taas oo ka hortagi doonta raasamaalka muhiimka ah ee jiritaanka carrada;
nadiifinta walxaha dhintay ee goobta beerashada, maadaama ay ku jirto iyaga oo fangasku ku kalsoonaanayaan inta lagu jiro xilliga jiilaalka;
jeermiska khaaska ah ka dib goosashada;
ilaalinta nidaam heerkulka joogtada ah oo ka sarreeya +20 ° C, iyo sidoo kale ka hortagga dhibcaha iyagoo isticmaalaya habab gaar ah (tusaale, filim caag ah);
hubinta habka waraabinta biyo diirran;
sameynta dalagyada khudradda leh diyaarinta gaarka ah sida "Kvadris";
u hoggaansamaan shuruucda ku saabsan codsiga Bacriminta nitrogen (haddii ay suurtagal tahay in la beddelo dhir ama fosfate).
Haddii ay dhacdo calaamadaha ugu horreeya ee cudurada caleemaha, waxaa lagama maarmaan ah in la garto tallaabooyin adag oo degdeg ah.
Sidoo kale akhri wargeyska ku saabsan wax ka qabashada caarada budada ah iyo caarada yaryar ee qajaarka.
Waxaa jira habab badan oo loola dagaallamo xagta udugga:
ku buufin dhirta leh isku dar ah caano caan ah ama caleenta biyo. Tani waxay gacan ka geysaneysaa in la takooro cudurka iyo ka hortagga faafitaanka sii badan. Sodium silicate ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa beddel;
Kufsi wanaagsan ee fangaska waa bakteeriyada lactic acid, taas oo, dalagga khudradda, ka saar cudur fangas. Sidaa darteed, waxaad ku daaweyn kartaa caleemaha leh kefir (waa la dhimi karaa), caano dhanaan ama caano fadhi;
Waxaad ku shubi kartaa saddex-meelood meel baaldi caaro leh biyo qabow oo saddex maalmood loo dhigo. Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad kala soociso dareeraha oo ku qoyso biyo (1:10 saamiga). Ku buufi warshadda leh xal Sidoo kale faleebada nettle leh codsiga buufinta si caleemaha noqon doonaa wax yar wax ku ool ah;
Nidaam weyn oo lagu daaweynayo dhirta isla markiiba ka dib marka cudurku yahay isticmaalka "EDC", "Tiovit Jet". Marxaladda dambe, "CE", "Hom" ama "Topaz" ayaa loo tixgeliyaa kuwa ugu waxtarka badan;
sariiraha dhul furan waxaa lagu daaweyn karaa xal 20% oo ah baaruud kolloid ah, iyo kuwa xiran oo leh xal 40%;
isku dar ah saabuun iyo baking soda oo leh saamiga siman ee miisaanka ayaa kaa caawin doona in laga takhaluso maraqada budada leh marxaladda 5-6 maalmood;
daaweyn firfircoon oo ka dhan ah cudurkan sidoo kale waa faleebo haramaha. Waxay u baahan yihiin in la jarjariyo, ku dar biyo, siiyaan meel ay ku degaan dhawr maalmood, ka dib markaa dareeraha soo baxaya si uu u socodsiiyo qajaarka.
Bannaanka beeraha ee aan rabin in ay isticmaalaan kiimikada hantidooda waxay isku dayi karaan in ay daaweeyaan dhirta daaweynta daawada iyo daawooyinka daawooyinka.
Video: dawooyinka dadweynaha ee xayrta budada ah
Caarada caaradu ma waxyeelayso bini'aadamka, laakiin waa arrin khatar u ah qajaarka, maaha oo kaliya faragelinta sawir-ficinta caadiga ah, laakiin waxay sidoo kale si weyn u yareyneysaa difaaca jirkiisa ee ka hortagga infekshannada kale. Khudradda caleenta ah ayaa si dhakhso ah u bilaabantay inay qalajiso oo ay iska tagto. Sidoo kale, unugkan xaasidnimo wuxuu sababi karaa caaryar naxaas ah, oo si xun u saameeya qaybta hoose ee qajaarka (caleemaha, miraha iyo caleemaha).
Baro wax badan oo ku saabsan caarada caarada: noocyada caarada caarada, habka ugu fiican ee wax looga qabto cayayaanka, sida loo takhaluso caarada caarada qajaarka.
Cayayaanka ayaa sii badinaya calaamadaha heerkulka iyo cimilada qallalan. Waa wax aan suurtagal ahayn in gabi ahaanba laga ilaaliyo dhirta cudurkan, maadaama dhirta si fudud loo qaado dabaysha. Go'aanka saxda ah wuxuu noqon doonaa in la qabto dhammaan tallaabooyinka ka hortagga agrotechnik. Calaamadaha guuldarada dhirta cudurkan waa:
dhibco cad oo ku yaal dhabarka caleemaha;
shabakad gaar ah oo ku saabsan dhaqanka khudradda;
caleemo huruud ah.
Marka la beerto qajaarka meel bannaan oo furan gaar ah ee tallaabooyin si looga hortago faafidda caarada caarada ugu badnaan:
ka dib goosashada, waxaa lagama maarmaan ah in la burburiyo dhammaan qaybaha geedka;
waxaa lagama maarmaan ah in la qodo aagga dhulka loogu talagalay beeritaanka qajaarka, maadaama ay cayayaanka sugayaan jiilaalka si taxadar leh ee lakabyada sare ee carrada;
Cuntada lagama maarmaanka ah xilliga jiilaalka cayayaanku wuxuu ka helaa caws, sidaas darteed waa in laga saaro ciidda inta ugu badan;
inta lagu jiro Bisaylkiisa dhaqanka khudradda, waxaa muhiim ah in si joogto ah u baaro walxaha geedka iyo, marka la aqoonsanayo caleemaha saameeyeen, isla markiiba saaro oo baabi'iyaan (gubi ama duur);
isbeddelka qajaarka la abuurayo yaanyada ama kaabajka ayaa faa'iido leh;
Waxa kale oo lagama maarmaan ah in lagu daweeyo bukaanka infekshanka leh biopreparations gaar ah.
Haddii qajaar sii korodhsanaysa xaaladaha aqalka dhirta, khatarta caarada caarada ayaa sii kordhisa marar badan, maaddaama xaalado aad u fiican lagu abuuray joogitaankooda iyo raaxeysigooda: heerkul sarreeya iyo huurka qoyan.
Baro sida loola tacaalo cayayaanka qajaarka iyo qajaarka daaweynta lagu koriyo.
Qiyaasta ugu waxtarka leh ee lagula dagaallamo cayayaanka kuwan soo koraya ee aqalka dhirta lagu koriyo waa inay kordhiyaan heerka qoyaanka ilaa 75-85%.
Sidoo kale waa lagama maarmaan in la soo saaro aqalka dhirta lagu daboolay ka dib goosashada iyo ka hor beerashada. Lakabka sare ee carrada waa in laga saaraa, iyo tuubada waa in lagu gubay qalab khaas ah (tusaale, kuleyliye gaas). Habka ugu fiican ee looga hortagi karo waa isticmaalka Bacriminta Fosfatiga.
Waa muhiim! Habka ugu muhiimsan ee xakamaynta cayayaanka - daawaynta sunta cayayaanka - maaha kuwo wax ku ool ah caarada caarada.
Waxaa jira qalab badan oo looga saaro cayayaanka khudaarta. Waxtarka ugu fiican ayaa la tixgeliyaa insectoacaricides, laakiin ma jiraan nidaamyo buufin caafimaad oo ku habboon caafimaadka bini'aadamka ee aagga furan, sidaa daraadeed, waxay si firfircoon u isticmaalaan habka xidhiidhinta galmada. Tirada isticmaalka daroogooyinkaasi waxay si toos ah ugu tiirsan tahay habka heerkulka (kulaylka sare ee akhrinta heerkulka, gaabnaanta mudada u dhexeysa buufinta). Kiimikooyinkaas waxaa ka mid ah Karbofos, Bitoxibacillin iyo kuwo kale. Waxaa lagula talinayaa in la dhajiyo dhirta leh diyaarintaas fiidkii, sidaas awgeed kiimikada kiimikada si deg deg ah uma hirgelin wakhti ay ku qaadato meelaha ay dhibaatadu saameysey. Phytoseiulus ciriiri ayaa loo tixgeliyaa habka ugu haboon ee loola dagaalamo caarada caarada, kaas oo ku yaal meel u dhow xarumaha dhirta saameeya. Gaajadaasi waxay burburisaa ukumaha cayayaanku, taas oo keeneysa burburinteeda. Qalliinka phytoseiulus waxaa lagula taliyaa inta u dhaxaysa saddex toddobaad.
Talooyin loogu talogalay inuu bannaanka u: sida loo maareeyo cudurada qajaarka; dawooyinka dadweynaha ee cudurada iyo cayayaanka qajaarka.
Waxa kale oo jira noocyo kala duwan oo dad ah oo lagu baabi'inayo cayayaanku:
daaweynta biyaha saabuunta;
ku faafaya goobta kudheerta;
beerashada dill, soo jiidashada ladybirds, kaas oo kaa caawin doona si dhakhso ah looga adkaado caarada caarada.
Video: la dagaallama caarada caarada qajaarka
Maaskara cad waa mid caadi ah cudurka viralkuwaas oo inta badan socdaalka dhirta bukaanka ah ama waxyeelo soo gaadhay. Fayruska wuxuu ku dhex jiraa dhaqanka qudaarta iyada oo loo marayo unugyada waxyeellada leh waxaana loo jiheeyaa xididada. Nooca cudurkan la isqaadsiiyo waa mid halis u ah qajaarka, sababtoo ah waxay si weyn u yareyneysaa tirada dalagga, sidoo kale waxay yareyneysaa sifooyinka tayada leh. Sababaha luminta dhaqanka ee cudurkan faafa wuxuu noqon karaa tilmaam heerkul sarreeya (+25 ° C) iyo kala duwanaanshaha weyn ee xilliyada habeenkii iyo maalinta.
Ma taqaanaa? Markii uu qajaarku ahaa raaxo aan caadi aheyn, sidaas daraadeed, Sultan Mahomet oo ahaa nin naxariis daran oo turxaan ah ayaa furay toddoba nin oo addoommadiisii ​​ah markuu ogaaday in mid ka mid ah ay cuneen khudradda loo soo diray.
Calaamadaha ugu muhiimsan ee lagu ogaado cudurkan waa isbeddel gaar ah muuqaalka geedka:
horumarinta jeexjeexyada ayaa si deg deg ah hoos u dhacaya;
on caleemaha yar yar sameeyay, dhibco cad oo leh cadaan huruud ah muuqan, taas oo, sida uu cudurku u socdo, isku dar hal spot cad oo xididada cagaaran;
Midhaha warshadu waxay leedahay qaab aan ku habboonayn qaabka caadiga ah iyo midab aan caadi ahayn iyadoo ku xiran heerka cudurka.
Waxaa jira habab badan oo loola dagaallamo cudurka, laakiin kaliya hirgelintooda saxda ah iyo maqnaanshaha beeraha khudradda ayaa kaa caawin doona inaad ka fogaato cawaaqibta la isku halleyn karo loona daaweeyo dhirta. Waxaa habboon in la ogaado in transplanting ama fungicides farsamadu ma aha hab wax ku ool ah ka takhalusi masaaki cad, laakiin tallaabooyin wax ku ool ah ayaa loo tixgeliyaa:
ka saarista mudada ah ee cawska sida vector vektor ee ugu badan ee caabuqa;
iibinta abuurka oo si khaas ah loo iibsado iibiyeyaasha xaqiiqda ah, sida dhirta ay ka qaadaan waa in aan la wasakhoobin (miraha waa in lagu keydiyaa saddex sano kadib goosashada);
dhammaan wixii haraaga ah ee dalagyada khudaarta ka dib goosashada waa in la burburiyaa;
Beeraha ugu dhow ayaa sidoo kale ka hortagga;
haddii ay suurtagal tahay, iska ilaali inaad qandhooyinka qandhada ku qabato biyo qabow si aad uga fogaato isbeddel deg deg ah heerkulka
dhirta cudurka qaba waa in si deg deg ah looga saaraa goobta degaanka;
qaadaan tallaabooyin badan oo kala duwan si looga hortago muuqaalka aphids;
jeermiska qajaarka caafimaadka leh iyo qalabka kulaylaha oo dhan.
Waxaan ku talineynaa in aan wax ka akhrino xakamaynta wejiga: kooxaha bayoolojiga iyo liiska cayayaanka caadiga ah; hababka dhibaatooyinka iyo daaweynta dadweynaha.
Video: la dagaallanka masaajidka qajaarka
Mid ka mid ah cadowga ugu weyn ee qajaarka waa aphid, oo aad tahay inaad ku bilawdid dagaal lagu dhexdhexaadiyo guga, iyo dhul furan laga bilaabo bartamaha xagaaga. Cayayaanka Tani waxay ku quudinaysaa dheecaan unug gaar ah. Nidaamka ugu badan ee isticmaalka badeecadda waxaa weheliya leexashada unugyada iyo cirbadda sunta, taas oo ka dhalatey caleenta caleemaha. In caleemaha foomkan, cayayaanka cayayaanka, iyo sidoo kale hindhiso shimbiraha iyo cayayaanka kale ee cadawga, ilaalinta dadweynaha. Aphil waxay si dhakhso ah ugu faaftaa dhammaan walxaha dhirta (ugxan, ubax, caleemo).
Waa muhiim! Haddii aphids la ogaado, tallaabooyinka ka hortagga waa in la qaado sida ugu dhakhsaha badan, sababtoo ah cayayaanku wuxuu si deg deg ah u burburin karaa qeyb muhiim ah oo dalagyada khudradda ka baxa oo ka baxa beeraha khudradda aan lahayn dalag. Khubarada ayaa sheegaya in haddii aysan ahayn dabiiciga "cadowga" ee cayayaanka, ka dibna ma jiri doono hal geedka meeraha, maxaa yeelay cayayaanku waa mid ciriiri ah.
Qodobada lagu quudiyo sharoobada macaan ee cayayaankaasi waxay soo saaraan goobaha cusub ee aphids. Sidaa darteed, tallaabada ugu muhiimsan ee ka hortagga waa in ay noqotaa burburinta gumeysiga degaanka ee agagaarka goobta ee beerista dhaqanka khudradda. Waxaa sidoo kale jira buuxa kakan ee tallaabooyinka ka hortagga ah si loo yareeyo saameyn kasta oo xun ee aphids on qajaarka:
waxaa lagama maarmaan ah in la doorto nooca ugu adkaysta ee dalagyada beeraha;
ee lagu koriyo waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in daldaloolajiyada hawada sida ugu badan ee suurtagal ah (ku adkee faashadda ama wax kasta oo mesh mashiinka kale ah);
on ciidda furan, daboolaya dhirta leh web aan nonwoven noqon doonaa tallaabo wax ku ool ah.
Si loola dagaallamo cayayaanka horay u sii faafay waxaa loo adeegsan karaa habka asalka qaranka, iyo sidoo kale alaabooyinka warshadaha casriga ah ee casriga ah.
Sidoo kale akhri ku saabsan dagaalka ka dhanka ah aphids daaweynta dad, ilaalinta qajaarka ka aphids.
Waxaa ka mid ah qaababka caanka ah ee ka soo horjeeda jirka waxaa jira hab gaar ah oo lagu daaweeyo dhirta leh tincture of tubaakada. Habkani wuxuu ku habboon yahay dhirta ornamental, laakiin ma aha qajaarka, taas oo loogu talagalay isticmaalka aadanaha. Qaabka ugu haboon ee dadku u qalmo in la qoro xeryahooda profile ka:
Baro wax badan oo ku saabsan samaynta boodhka, baradho iyo daboolka yaanyada.
Hagaajinta badan ee saameynta wanaagsan ee ka kooban qaybta waxay sidoo kale u baahan tahay in lagu daro saabuunta saabuunta. Meelaha hoose ee caleemaha dhirta waa in si taxaddar leh loo shaqeeyaa toddobaadkii hal mar ilaa inta cayayaanku gabi ahaanba la tirtiro.
Waa muhiim! Waxaa lagama maarmaan ah in si adag loo ilaaliyo foojignaanta faleebo, maadaama ay bustingu kaliya ma baabi'in karto cayayaanka, laakiin sidoo kale waxay gubi kartaa geedka laftiisa, sidoo kale waxay burburin kartaa cadowga dabiiciga ah ee aphids, oo dadkoodu ka soo kabanayaan inta badan si tartiib ah marka loo barbar dhigo aphids.
Sidoo kale adeegga wanaagsan ee la dagaallanka cayayaanka ayaa yeelan kara alaabada adeegga casriga ah:
vodka wuxuu muujiyey awood fiican marka la buufinayo dhirta cudurka qaba, laakiin habku wuxuu leeyahay khasaare weyn - qiimaha;
Coca-Cola waxaa ka mid ah qayb gaar ah - midka lafaha ah. Tani waxay si dhakhso ah u dishaa dhammaan xayawaanka noolaha ku jira dalagyada khudradda leh mashiinka habboon;
Saliid asaasi ah iyo soodhad ah oo lagu qiyaaso 70 g oo ah soodinta dubista 15 dhibcood oo saliid ah iyo 2 litir oo biyo ah. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu buufiyo dhaqanka leh isku dar ah sida hal mar maalintii saddex maalmood, taas oo damaanad qaadaya burbur dhamaystiran oo cayayaanka.
Waa qiimo gaar ah in la siiyo taxadar gaar ah shuruucda isticmaalka xalka. Si aad u tijaabiso waxtarka, waxay ka wanaagsan tahay in la kobciyo qayb yar oo beerta khudradda ka mid ah oo arag natiijooyinka, kadibna ka dib boodhka dhammaanteed beerto. Hawlaha waxaa sidoo kale lagu samayn karaa marxaladda daaqsinka miraha, laakiin ugu dambeyn 40 maalmood ka hor goosashada.
Ogow sababta ay ugxan-yari iyo caleemaha qajaarka u noqdaan huruud.
Laga soo bilaabo liistada cayayaanka, Kinmiks, Inta badan-vir iyo Arrivo waa kuwa ugu haboon, iyo kiimikooyinka - Fitoverm, Aktofit iyo kuwa kale. Daroogooyinkaasi waa kuwo sun ah, sidaas darteed waxaa lagula talinayaa in ay ku dalbadaan ugu dambeyn saddex toddobaad kahor muuqaalka ugxansidaha.
Sidoo kale, Bacriminta fosfatiga iyo potash waxay gacan ka geysan doontaa in laga adkaado aphids, oo ay tahay in lagu daro toddobaadkii hal mar. Xalka waxaa la abuuraa iyadoo lagu daray 18-20 g superfosphate iyo 8-10 g chloride potassium 10 litir oo biyo ah.
Video: siyaabo aad wax uga qabatid aphids on qajaarka
Kareemka cad waa cudur fungal caadi ah ee dhirta aqalka dhirta lagu koriyo oo saameynaya dhammaan qaybaha dalagga, oo ay ku jiraan stem, caleemaha iyo miraha. Xaalado wanaagsan oo loogu talagalay horumarinta funguska sclerotia ayaa ah qoyaan badan iyo hoos u dhac ku yimid tilmaamayaasha heerkulka deegaanka dibadda. Sidoo kale, cudurku wuxuu muujinayaa xoogaa weyn inta lagu jiro beerashada cufan iyo hawo aan joogto ahayn ee aqalka dhirta lagu koriyo. Fiiqda ugu yar ee fangaska, oo lagu qabto boogta khudaarta, waxay keenaysaa caabuq geedka. Calaamadaha cawska cad ayaa ku xiran hadba heerka infekshanka:
marxaladda ugu horreysa, dhibco qoyan ayaa la sameeyaa, kuwaas oo si dhakhso ah uga soo baxa xididada;
ka dibna booska dhibcaha koritaanka qunyar-socodka ah ayaa la sameeyaa - a mycelium (muuqaal ahaan u egtahay suufka);
ka dibna xabo ayaa laga sameeyay suufkan, kaas oo ka soo baxaya caleemaha warshadda saameeysatey si ay uhesho kale;
markaa mycelium wuxuu noqdaa mid cufan wuxuuna abuuraa sclerotia gaar ah;
Taas ka dib, burburka dhamaystiran ee dhaqanka khudradda ayaa la qabtaa.
Waa muhiim! Sclerotinia waxay saameyn xun ku yeelan kartaa marxaladaha kala duwan ee daaqsinka miraha, laga bilaabo biqilka iyo soo afjaridda masraxa.
Caleemaha cad waxay ku galaan ciidda carrada bulkada, biyaha ama qalabka beerta. Caabuqa wuxuu ku dhacaa miisaanka, kaas oo ku faafa marinnada hawada iyo farsamada. Dhimashada qajaarka ayaa sababa cirridka iyo xididdada. Sidoo kale qalajinta caleemaha si weyn u yareynayaa dhalidda ee geedka. Поэтому устранять заболевание нужно немедленно после выявления первых признаков (желательно в безветренный день с нормальной влажностью воздуха). Для начала необходимо прекратить полив и удобрение пораженных растений для снижения влажности. Саму инфекцию нужно лечить теплым раствором "Топаза" или "Оксихомом" при нормальной температуре.
Waxaa sidoo kale jira qaab caan ah oo loo isticmaalo qashinka biyaha lagu daro (3: 7). Si loo wanaajiyo saameynta 10 litir oo xal ah, waa inaad ku dartaa shaaha sulfate copper.
Baro wax badan oo ku saabsan isticmaalka maadada buluuga ah: isticmaalka beerta, waxyeelada iyo cawaaqibta sumowga bakteeriyada.
Haddii uu cudurku ku dhufto qayb yar oo ka mid ah dhirta, markaa waa lagama maarmaan in la fuliyo qiyaasta xiga ee xiga:
codso xalka foorjar, fardaha kiriimiga ah iyo biyaha qaybaha ay saameysey;
in la kala saaro oo la burburiyo aagagga ay dhibaatadu saameysey (waa muhiim in la qabsado nudaha qaar caafimaad qaba marka la kala qaybinayo si loo yareeyo suurtagalnimada dib-u-qaadista);
geedi socodka gooyaa lime ama dhuxul si loo dedejiyo geedi socodka dib u soo kabashada;
markaa waa lagama maarmaan in la soo saaro bacriminta cagaarsho leh xal of HOL (10 g), zinc (1 g), sulfat copper (2 g) 10 litir oo biyo ah. Tani waxay gacan ka geysan doontaa xoojinta howlaha ilaalinta dhirta;
si loo hubiyo shuruudaha koritaanka caadiga ah ee baadiyaha: + 17 ... +19 ° S, hawo gaaban iyo waraabin badan.
Iyada oo ay ku jirto infakshan xoog leh oo ka timaada baadiyaha (marka kalluun cad oo uu soo nuugo dhirta oo dhan), daaweyntu maaha wax macquul ah, sidaa daraadeed waa lagama maarmaan in laga saaro warshadda iyo ciidda ku dhow si loo badbaadiyo dhaqamada deriska ah.
Hannaanka ka hortagga waxaa ka mid ah qaybaha nidaamka nidaamka: daaweynta ciidda ka hor intaan la beeri, hubinta masaafada caadiga ah ee dhirta, ka saarista harta ka dib goosashada. Tallaabooyinka gaarka ah ee noocan cudurka ah waxaa loo tixgeliyaa in ay noqdaan hawo joogto ah, ilaalinta heerarka caadiga ah ee qoyaanka hawada, iyo sidoo kale daaweyn hal mar ah oo duurka ah oo leh 0.01% qorshaha planriz.
Video: ka hortagga iyo xakamaynta kallanaarka cad
Cagaarka cagaaran waa cayayaanka khatarta leh ee qajaarka ku nool aqallada lagu koriyo. Nasiibku si dhakhso ah ayuu u soo saari karaa, gaar ahaan haddii tallaabooyinka ilaalinta dhirta aan habbooneyn, aaney cayayaankaasi ay hirgelinayaan dhismaha oo dhan. Wakiil qaangaar ah oo loogu talagalay cagaarka cagaaran ayaa calaamad u ah joogitaanka jir hurdi ah oo leh qiyaasta 0.9 ilaa 1.5 mm. Baalasha cayayaanka waa caddaan, adadag, awood u yeesho in ay isku mid noqdaan. Whiteflies leeyihiin antennae brown light. Dirxiga cayayaanka this koraan ilaa 0.8 mm dheer, leeyihiin qaab qotan, qaabka huruud ah-cagaaran iyo indhaha guduudan. Mid kasta oo ka mid ah haweenka aqalka dhirta cagaarka ah waxay awood u leedahay in ay soo saaraan in ka badan boqol jinsi, horumarinta embriyaha oo ka bilaabma toddobaad ilaa laba, taas oo ku xidhan nidaamka heerkulka ee deegaanka.
Ma taqaanaa? Laga soo bilaabo ukunta la bacrimiyey, labada ragga iyo dumarka labadaba waxay u muuqdaan 1: 1, laakiin heerkulka hawada sare wuu ka sarreeyaa, tirada badan ee ragga. Geedka ukunta aan lahayn, waxaa keliya oo la sameeyaa ragga.
Qaybta nolosha ee cayayaanka waxaa lagu gartaa jiritaanka lix marxaladood, laga bilaabo ukunta, afar marxaladood oo ka mid ah dhalada iyo muuqaalka. Laga soo bilaabo marxaladda ukunta ilaa marxaladda soo socota, waxay qaadataa 20 ilaa 40 maalmood, taas oo si toos ah ugu xidhan heerkulka (tilmaamayaasha ugu wanaagsan - + 21 ... +27 digrii korka eber) iyo qoyaanka hawada (laga bilaabo 60 ilaa 75%). Muddo hal xilli ah, horumarinta toban iyo in ka badan jiilalka caddaanka ah ee caddaanka ah ayaa dhici karta.
Waxaan kugula talineynaa inaad akhrido hababka loo xakameeyo cayayaanka cayayaanka.
Whiteflies cadceedu waxay door bidaan in ay soo galaan kooxo dhowr ah oo darsin ah oo ku yaala hoose ee caleen, sameynta sawir la mid ah giraan. Whiteflies cadeyn ah, sida dirxiga, ku quudiyaan dheecaan ee dhirta la doortay, taas oo aan u oggolaan in ay si caadi ah u horumariyaan. Ka dib markaa, cayayaanka qarsoon ee dareeraha sonkorta leh dhadhan macaan, taas oo sabab u ah muuqaalka muuqaalka cudurada fangas (fungus madow) on caleenta dhirta, taas oo sii xoojin dhaawaca ee dalagga khudradda. Haddii ay dhacdo dhaawac halis ah caleemuhu waxay noqdaan kuwo madow oo ka soo baxa lakabadda, oo si tartiib ah u qalajinaya, sababtoo ah lakabka madow waxay ka hortagtaa sawirradu. Dhaqanku wuxuu bilaabmaa nidaamka cudurka, tirada miraha waxay noqotaa wax ka yar iyo ka yar, iyo goosashada keentay waa mid aad u yar. Marka hore, caleemaha ayaa kor u kaca sarreeya, ka dibna caleenta ayaa la dhaqaajin doonaa dhammaan taranka dalagga, iyaga oo ku dhacaya dhirta deriska ah oo ay la qabsadaan. Xilliga xagaaga, si kastaba ha ahaatee, waxay u wareegeysaa dalagyada khudradda iyo cagaarka meelaha bannaan.
Waa muhiim! Whitefly aqalka cagaaran ayaa lagu gartaa heerka ugu weyn ee dhaqdhaqaaqa tan iyo qeybtii labaad ee xagaaga iyo dayrta. Siyaabo badan, dhaqdhaqaaqa nolosha ee cayayaanku waxay ku xiran tahay dhirta uu ku shaqeynayo: waa ugu sarreeya ukunta (35 cisho ama wax ka badan), iyo minimal ahaan (4 maalmood) basbaas.
Hothouse whitefly waxay degi kartaa in ka badan 200 nooc oo dhirta laga beero, laakiin gaar ahaan waa halis u ah qajaarka iyo yaanyada. Si looga fogaado muuqaalka kore ee aqalka dhirta loo yaqaan "greenfly" ee dalagyada, waa lagama maarmaan in la qaado tallaabooyin taxadar leh, fulin daaweynta qashinka:
furitaanka hawo-qaadashada ee lagu koriyo waxaa lagu talinayaa inay xirto maro-kaneecada;
Ka hor inta aan laga beerin khudradda aqalka dhirta lagu koriyo, haramaha waa in si buuxda looga saaraa oo loo sameeyaa si joogta ah oo joogto ah iyo wixii ka baxsan;
habka dhaqanka si joogto ah ula xalinta saabuunta guriga;
waxaa lagula talinayaa in lagu hayo qaab aan heerkulkiisu sarreeynin aqalka dhirta lagu koriyo (cayayaanku wuxuu jecel yahay kulaylka iyo kuleylka);
Waxaad ku dabiici kartaa ciidda adiga oo ku daraya dabacsi si aad u cabsiiso cagaarka, laakiin habkani wuxuu ku habboon yahay dalagyada hooseeya.
Tallaabooyinka kahortagga ee noocaan ah mar walba ma shaqeynayaan, waxayna bilaabaan inay muuqdaan. calaamadaha joogitaanka aqalka dhirta lagu koriyo:
dhibco huruud ah ayaa muuqan doona caleemaha xudduudaha la soo koobay, oo si tartiib tartiib ah u kordhaaya cabbirka;
caleemaha iyo caleemaha waa la xiiray, ka dibna gebi qalalan;
on top of caleemaha waxaa jira weeraro leh garasho cad oo;
infakshanka fangasku wuxuu kobcayaa, kadibna madow waxay saameeyeen midhaha miraha.
Baro waxa la sameeynayo bartamaha qajaarka.
Kadib marka la ogaado calaamadaha caynkaas ah waa inay codsadaan habab dagaal oo caddaan ah:
Hababka xakamaynta farsamada (qaadashada cayayaanka muuqata gacanta, ka soocida biyaha biyaha, daaweynta dalagyada xalinta saabuunta dharka) ma kala duwanaan dammaanad ah, sababtoo ah cayayaanka ayaa mar kale ku iman kara dalagyada, si kastaba ha noqotee, waxay u fududaan doontaa dhirta mudo ah. Farsamooyinka farsamada waxaa ka mid ah soo saarista dabagal adag oo ka samaysan warqad huruud ah ama buluug ah oo lagu daaweeyo xal saliid ah, saliida jelly, rosin, malab.
Qaababka bayoolojiga ee xakamaynta: curkariin parasite, oo si khaas ah loo koray si loola dagaallamo caddaan iyo dhimasho sida ugu dhakhsaha badan ee ay u cunaan dhammaantood; bacriminta dabiiciga ah (rogaal celinta) (1-joodar oo madax ah ku shub nus litir oo biyo ah, ka bax toddobaadkii, ka dibna ku qoyso biyo qiyaas ah 5 g oo faleebo halkii litir oo biyo ah iyo geeddi-socodka dhirta oo idil, ikhtiyaarka labaad - 80 g caleemaha yar yar ku shub hal litir oo biyo ah, cadaadiska, buufinta dhaqanka);
Hababka xakamaynta kiimikada (isticmaalka wakiilada cayayaanka ee kiisaska khatarta ah ee leh waxyeelo weyn oo loo geysto dalagyada dhirta cagaaran).
Video: la dagaalanka cadaanka
Daaweynta cudurada qajaarka: dib u eegista
Ka horjeeda caarada budada ah, marwalba waxaan isticmaalaa dareeraha bordeaux. Waxaan sidoo kale kugula talineynaa alaabooyinka salfiga ku salaysan. Marxaladaha hore waxay u fiicnaan lahayd in lagu daaweeyo xal aan xooggan lahayn ee kaneecada.
Caarada caarada ayaa ka cabsanaysa saabuunta dharka caadiga ah. 2-3 jeer ku filan si loo daweeyo dhirta ay saameeyeen biyo iyo saabuunta dhirta deriska ah. Haddii cimiladu ay roobab tahay - xitaa roob kasta kadib. Dhirta caafimaad leh adiga ayaa!
Aphid waa cayayaan caadi ah. Daawooyinka dadweynaha si loola dagaallamo: 1. Isku duub dhamaan cayayaanka muuqaalka leh suufka ama faashad faashad lagu qooyay si adag oo saabuun. (1 saac oo saabuun ah ilaa 6 saacadood oo biyo ah). Beddelka tampon marar badan, tirtir caleemaha iyo laamaha dhirta oo xal. Ha ku shubin xalka. 2. Nidaam aad u weyn oo si fiican loo yaqaan oo looga hortago aphids - daaweynta suntan tubaakada. Qaado 1 sharaf oo ah shag 10 saacadood oo biyo kulul ku adkeysanaya laba maalmood. Saameyntii keentay waxaa la kariyey 2 saacadood, qaboojiyey oo la sifeeyay. Isla markiiba ka hor inta aan la buufin, maraqku waa la qasi karaa biyo (1: 2) iyo xalka saabuunta guriga lagu daro (10g halkii xal 1 litir). Laakiin xalalka tubaakada waa sunta dadka iyo xayawaanka raba.
Muddo 30 sano ah, waxaan ku orday sannadkii hore oo cadaan ah (waxaan qabaa inay keentay "Kaaliye Wanaagsan" oo leh dhulka la iibsaday - waxay koray geedo guriga ah). Waxaa weli ku sugan guriga, on basbaas. Sababtoo ah Anigu ma garanayn waxa ay tahay, rusheeyeen aphids. Waa la waayay. Laakiin, hadda, waan ogahay, waxaa jiray ukun, taas oo macnaheedu yahay wax aan caadi ahayn. Natiijo ahaan, dacha whitefly meel kasta: yaanyada, qajaarka, zucchini, eggplants, basbaaska Bulgarian (ugu yar oo dhan), ubaxa, gaar ahaan zinnias, laaluushka, qabashada. Thanks to this "caawiye wanaagsan", xagaaga oo dhan wuxuu ahaa sumowga labadaba labadaba iyo dareenka buuxa ee ereyga. Weli waxaa suurta gal ah in lagu buufiyo kiimikada 4-5 maalmood. Isku dayay xagga hoose, xaashid kasta. Kadibna waxay noqotey mid aan suurtagal ahayn in lagu dalbado kiimiko Inkastoo uu soo daahay, weli waxaan xasuustaa Simone (oo ah caleemo lagu dhaqo xilligii Soofiyeeti) oo wuxuu helay mid ka mid ah dukaanka. Ilaalinta isha (~ 3 tbsp. 10 litir oo biyo ah). Dajinta. Halkaan dhab ahaantii waxay ahayd natiijada: taas oo markiiba ku dhufatay xaashida, dabadeedna dadka kale waxay haysteen wakhti ay qaadaan oo ay dhacaan. Laakiin dirxiga, sida muuqata, weligeed ma dhiman, wax walbana waa la sii ballaariyay in aadan ku rushayn karin xaashid kasta. Waxaan u isticmaali jirey yaanyo iyo waxyaabo kale - wax kasta oo ku koray xawaashka (mararka qaarkood illaa November). Sanadkii la soo dhaafay, dhammaantood waxay soo jareen dhammaadkii Sebtembar. si ay u gubaan dirxiga (oo la gubay leh dhirbaaxo weyn). Dabcan, waxay ku sii jirtay meel.
Beerashada qajaar waa geedi socod fudud oo fudud haddii la daaweeyo si masuuliyad leh, si taxadar leh, iyo sidoo kale haddii dhammaan tallaabooyinka ka hortagga ah lagu fuliyo waqtiyo adag. Iyada oo habkan, dhirta ayaa u mahadcelinaysaa goosashada cajiib ah ee qajaarka quruxda badan, quruxda badan iyo caafimaad leh, iyo ciidda waxay ahaan doontaa nadiif ah oo bacrin ah.
15 geedo qallafsan iyo geedo si ay u bixiyaan
Sida loo sameeyo nuujin qoyan
Bacaha beerta jecel yaanyo "Chio Chio San": sharaxaadda kala duwanaanta, sifooyinka, sawirada
Canaan aan la qabin oo macaan leh "Black Raven"
Ka waran haddii xididada caleemaha la gooyey iyo sida loo si habboon u beero guriga ama dhulka hoostiisa?
In Russia, kaabash muddo dheer waxaa laguula dhaqmaa jacayl iyo ixtiraam. Kaabashka waa ku fiican yahay waxqabad kasta, laakiin kaabajka lakala qaado, dabcan, waa ka baxsan yahay tartanka. Her - qumman iyo qajaar ama jilicsan iyo casiir leh - sida wax kasta oo ku dhow. Kaabashka la kariyey waa mid ka mid ah suxuunta ugu jecel ee dhinacyada oo dhan, sababtoo ah waxay ku xirantahay kaluun iyo hilib. Read More
Noocyada noocyada korriinshaha gloxinia "Esenia"
Isticmaalka Dalagga ee Blueberry: Waxaanu ku korinaa barojik